Nagu saabsan - Xiamen qundeli industry & trade Co., Ltd.
Sheekada ka dambaysa aasaasaha iyo taariikhda summada
Sannadkii 2005, warshadaha kabaha ee Shiinaha ayaa si xawli ah u kobcay, laakiin tayada ayaa ahayd mid aan sinnayn, waxaana suuqa buuxdhaafiyey dacas badan oo aan buuxin heerarka tayada. Ka dib ku biiritaankii Shiinaha ee WTO, warshadaha ganacsiga shisheeye waxaa soo saaray boodbooyin iyo soohdimo, laakiin tayada wanaagsan ee asalka ah iyo qiimaha jaban ee kabaha suufka ah ee Shiinaha ayaa dhaleeceeyay macaamiisha shisheeye sababtuna tahay jiritaanka waxyaalo yar oo qallafsan. Wakhtigan markii sumcadda sumcadda Shiinaha la weerarayay, in yar oo dhallinyaro ah oo isku fikrad ah oo ku nool Jinjiang, oo ah caasimadda kabaha Shiinaha, ayaa isugu yimid oo aasaasay Kabaha Qunli, oo u heellan soo saarista kabaha qaranka oo tayo fiican leh oo aan qaali ahayn si macaamiisha loo siiyo xirashada khibrada.
Kabaha Qunli wuxuu markii hore ahaa warshad yar oo ku takhasustay soo saarista EVA iyo dacasyada PVC. Markii ugu horraysay, waxay soo saartay dacasyo aad u hooseeya waxayna ka iibisay suuqyada Afrika, Bariga Dhexe iyo Koonfur-bari Aasiya iyada oo u sii marisay ganacsatada Yiwu iyo Guangdong. Goor dambe, markii la horumariyey suuqa, waxay soo saartay tiro badan oo kabaha beerta godka EVA ah iyo kabo. Laga soo bilaabo 2011, shirkadeenu waxay ka qeyb qaadanaysay Bandhigga Canton laba jeer sannadkii, kaas oo aan kula kulannay macaamiil aad u sarreeya oo ka kala yimid Yurub, Ameerika, Japan iyo Kuuriya oo wata sumado shisheeye oo caan ah. Shuruudaha macmiisha ee tayada alaabta ayaa si joogto ah loo hagaajiyay, iyo noocyada kala duwan ee alaabta ayaa si joogto ah loo xoojin jiray sannad kasta, iyo mugga dalabka ayaa sidoo kale si joogto ah loo kordhiyay.
Si si wanaagsan loo daboolo baahiyaha macaamiisha, loo fududeeyo dhoofinta badeecadaha, loona ballaariyo baaxadda wax -soo -saarka iyo horumarinta shirkadda, waxaan dhisnay 2015 Xiamen Qundeli Co. kooxda xakamaynta tayada si ay si wanaagsan ugu adeegto macaamiisheena, waxaanna awoodnaa inaan horumarinno noocyada kala duwan ee badeecadaha iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha kala duwan ee suuqyada kala duwan, iyo inaan la kulanno shuruudaha macaamiisha qaarkood si ay si madax bannaan u hormariyaan caarrooyin u gaar ah macmiilka wax soo saarka iyo iibinta gaarka ah macaamiisha. Hadda, Xiamen Qundeli Co., Ltd. wuxuu u hormariyay soo -saaris, wax -soo -saar iyo ganacsi dhoofineed oo leh kabaha Qunli oo ah xarunta iyo qaar ka mid ah warshadaha walaasha ee dhow sida Wishauer iyo Kukuijia oo ah shuraako.
Badeecadeena waxaa inta badan loo dhoofiyaa Jarmalka, Faransiiska, Talyaaniga, Isbaanish, Japan iyo Kuuriyada Koonfureed. Shantii sano ee la soo dhaafay, shirkadeena waxay si tartiib tartiib ah u horumarisay macaamiisha Koonfur -bari Aasiya, Bariga Dhexe iyo Koonfurta Ameerika.
Waxaan leenahay koox R&D oo xirfadle ah, oo si joogto ah u raadineysa naqshadeynta caalamiga ah iyo fikradaha hal -abuurka leh. Ka dib markii in ka badan toban sano 'horumarinta, shirkadeena waxay noqotay mid ka mid ah alaab -qeybiyeyaasha ugu fiican warshadaha kabaha ee Jinjiang, magaalada kabaha ee Shiinaha, iyo kabaha beerta iyo kabaha ayaa ah mid gaar ah. Badeecadeenu waxay caan ku tahay dibedda tayo ahaan heerka koowaad iyo qiimaha tartan. Qaar ka mid ah dacasyadayada ayaa si adag looga sameeyaa qalabka ugu fiican ee kabaha caagga ah iyo caagagga, kaliya si loo abuuro kabaha sumadda ee ugu sarreeya adduunka.
Si loo buuxiyo heerarka caalamiga ah, alaabtayada ayaa ka gudubtay imtixaanka shahaadaynta ilaalinta deegaanka Yurub, warshadeena waxay dhaaftay shahaadada BSCI iyo nidaamka maaraynta tayada ISO, dhoofinta ilaa 5 milyan oo lammaane oo kabo tayo sare leh ah sanad walba. Si looga helo khibrad cag oo ka fiican Jinjiang, Shiinaha macaamiisha adduunka, marka lagu daro habka wax soo saarka ODM, shirkadeena ayaa sidoo kale si xoog leh u horumarisa habka OEM si ay u soo saarto badeecado la oggol yahay oo ah sumcadaha adduunka caan ka ah, sida SAFTY JOGGER, OXPAS, FUNTOWN SHOES iyo kuwa kale Noocyada caanka ah ee kabaha shaqeynaya iyo kabaha badbaadada, iyo sidoo kale magacyada idman sida Disney, Spider-Man, Marvel iyo Warner. Wada-hawlgalayaasheena muddada-dheer ee ganacsi waxay ku baahsan yihiin adduunka oo dhan, oo ay ku jiraan DEFONSECA-da Talyaaniga, oo xoogga saarta soo saarista dacas iyo kabo, iyo qaar ka mid ah noocyada caalamiga ah BATA, CORTINA, KAPPA, EMFILA, iyo sidoo kale shirkadaha tafaariiqda ee ugu sarreeya adduunka ALDI ee Jarmalka iyo Kooxda AUCHAN ee Faransiiska.
Iyada oo leh badeecooyin aad u fiican iyo adeeg hufan, waxaan ku guuleysanay raalli ahaanshaha macaamiisha adduunka oo dhan, oo keliya inaan si taxaddar leh ula dhaqanno ayaan goosan karnaa macaamiisha daacadda ah.
Xilligii cudur-dilaaca ka dib, suuqa caalamiga ahi wuu cakiran yahay, laakiin shirkadeenu had iyo jeer waxay ahaan doontaa taageerahaaga ugu xoogga badan, sidoo kale waxaan si diiran u soo dhaweynaynaa kuwa danaynaya inay ku biiraan qoyskeenna weyn ee Qundeli.
Waxa Aynu Sameyno
Warshadaha Kabaha Qunli Co.Ltd. waa kabo xirfad lehwarshad iyo dhoofiye oo diiradda saaraya horumarinta, soo saaridda iyo iibinta nooc kasta oo Kabaha EVA oo ay ku jiraan EVA Slipper, Sandal, Kabaha Beerta ， Kabaha Shaqada. Badeecadahayagu waxay si fiican ugu iibiyaan Yurub, USA, Japan, iyo dalal kale ama gobollada adduunka oo dhan.
Ku qalabaysnaa heegan R&D waaxda, Kabaha Qunli waxay leedahay koox horumarin xirfadeed oo ku qalabeysan falsafadda naqshadeynta caalamiga ah iyo fikradaha hal -abuurka leh. 40,000 aqoon isweydaarsi mitir laba jibbaaran iyo 10 khad wax -soo -saar si aan u bixin karno qiyaastii 800,000 oo kabo ah bil kasta.
Dhammaan badeecadahayagu waxay dhaafeen kormeerka adag ee waaxda tayada. Kabaha Qunli waxay dhiseen astaan ​​u gaar ah - "Qunli" muddo dheer oo maamul ah kadib. OEM iyo ODM labadaba aad ayaa loo soo dhaweynayaa.
Aragtida Shirkadaha iyo Dhaqanka
Waxay si qoto dheer ugu xidideysan tahay falsafadeena ganacsi si aan u siino macaamiisha kabo aad u raaxo badan oo dadka ka dhiga inay dareemaan farxad oo ay ku raaxaystaan ​​waayo -aragnimo wanaagsan marka la isticmaalayo alaabtayada. Qanacsanaanta macmiilku waa halbeegga lagu tijaabiyo tayada alaabta. Dhegayso jawaab celinta macaamiisha, faham baahidooda, qeex heerarka tayada oo samee wax kasta oo suurtogal ah si loo kordhiyo qanacsanaanta macmiilka iyo daacadnimadiisa. Kabo kasta oo kabo ah, waxaa naga go'an inaan abuurno mustaqbal wanaagsan, kaliya ma soo saarno kabo, waxaan sidoo kale nahay xamaaliga farxadda ee macaamiisha.
Bixi badeecado iyo adeegyo xirfad leh, u samee adeeg wanaagsan macaamiisha, u samee qiime sare, ha iska hubiyaan la -hawlgalayaashu, ha oggolaadaan macaamiisha.
Ku socota warshadaha
Ku dhiirri-gelinta codsiyada adag lafteeda, waxaan noqon doonnaa ganacsi wanaagsan, hal-abuurnimo joogto ah, waxaan ku dhiirrannaa inaan qaadno habab iyo teknolojiyad cusub si kor loogu qaado wax-ku-oolnimada, hagaajinta adeegga, xitaa si aan u noqonno shirkadda ugu saamaynta badan Shiinaha iyo inaan ka dhigno alaab-qeybiyeyaasha kabaha samaynta kabo caalami ah oo aad u fiican. waxay u socdaan si ay ugu dadaalaan inay noqdaan halbeegga warshadaha, si kor loogu qaado horumarka iyo horumarinta warshadaha kabaha, hoggaamiyaan isbeddellada moodada.
Responsibility Mas'uuliyadda dhaqaale: bixinta canshuuraha sida waafaqsan sharciga ayaa ah mas'uuliyadda ugu weyn ee shirkad. Shirkadeena ayaa ahmiyad weyn siisa bixinta canshuurta shirkadaha, si adag u hoggaansan sharciyada iyo qawaaniinta canshuuraha ee maxalliga ah, si taxaddar leh u fulisa waajibaadka canshuuraha, si firfircoon u qabata mas'uuliyadaha bulshada, oo wax ku biirisa dhismaha dhaqaalaha maxalliga ah.
● Masuuliyadda bulshada: Shirkadeena waxay had iyo jeer diiradda saareysaa kor u qaadista shaqaalaynta dadka deegaanka, haweenka, dadka laga tirada badan yahay iyo ardayda kuleejka, waxayna ku dadaaleysaa inay kordhiso fursadaha shaqo ee deegaanka.
● Masuuliyadda deegaanka: Waxaan isku deyeynay inaan helno agabyo bey'ad u wanaagsan oo nooleyaal leh si loo hagaajiyo wax -soo -saarka, si aan u qabanno qaybteenna si aan u gaarno dhul cagaaran. Marka la eego tayada, waxaan ku adkeysaneynaa inaan sameyno isku -darka, iyo marka la yareeyo kaarboonka, waxaan ku dadaalnaa inaan sameyno kala -goyn. Waddada ilaalinta deegaanka iyo keydinta tamarta, waxaan qaadnay tallaabo.
Waxaan had iyo jeer u hoggaansannaa mabda'a "dadka ku jihaysan", xushmee oo ula dhaqannaa shaqaale kasta si isku mid ah, u ilaalino una ilaalino xuquuqda iyo danaha shaqaalaha, fiiro gaar ah u yeelanno horumarinta xirfadda iyo caafimaadka jidheed iyo maskaxeed ee shaqaalaha, kuna dadaalnaa sameynta habka wadaagga dheefta ee u dhexeeya shirkadda iyo shaqaalaha.
Marka laga hadlayo xuquuqda aadanaha, shirkadeena waxay had iyo jeer ula dhaqantaa shaqaalaha si isku mid ah dalal iyo gobollo kala duwan, qowmiyado, isir, jinsi, caqiidooyin diimeed iyo sooyaal dhaqameed. Waxaan mamnuucnay shaqaalaynta ku -shaqaynta carruurta, waxaanan diidnaa dhammaan noocyada qasabka iyo qasabka ah. Shirkadeena waxay had iyo jeer diiradda saartaa kor u qaadista shaqaalaynta dadka deegaanka, haweenka, dadka laga tirada badan yahay iyo ardayda kuleejka, waxayna ku dadaaleysaa inay kordhiso fursadaha shaqo ee deegaanka.
GERMANY: ALDI, ROSSMAN, HR GROUP
FRANCE: AUCHAN, BACKFOX
ITALY: DEFONSECA, KAPPA, COOP
SPAIN: SPRINTER, NICOBOCO, HELLWEB
Iskaashi Wada -shaqayn
Kabaha Jinjiang Qunli
Kabaha Jinjiang Kukujia
Kabaha Jinjiang Topshark